Had iyo jeer Xidho: 10 Istaatistikada Wadista Iibinta Isbedelka | Martech Zone
Kooxda ka socota Microsoft waxay diyaariyeen warqad cad oo cajiib ah oo ku saabsan caqabadaha iyo guulaha ururada iibka, wax soo saarkooda, iyo awooda la qabsiga iyo la qabsiga tikniyoolajiyadda. Waxaan badiyaa la kulannaa shirkado sameeya natiijooyinka iibka ee cajiibka ah ee ka yimaada ereyga-afka iyo wicitaanka qabow. Marnaba shaki kama lihi in labada xeeladood midkood shaqeeyaan - dabcan way shaqeeyaan.
Istaraatijiyadaha iibka ee shirkado badan isma beddelin toban sano. Taasi waa nasiib darro, maxaa yeelay waxa isbedelaya waa safarka iibsadaha iyo sida macaamiisha iyo ganacsatadu isku mid u baarayaan go'aankooda soo socda. Xitaa marka ganacsi uu helo gudbin weyn oo ka timid lamaane ama macmiil, rajadaas ayaa markaa baareysa shirkaddaada iyo maamulkaaga khadka tooska ah. Su’aashu waxay tahay Intee in le'eg ayay shirkaddaadu wakiil uga tahay halka ay raadinayaan?
Iibiyeyaasha xoogga badani kaliya maahan inay si wanaagsan u gutaan howlahooda maalinlaha ah… waxay ku tiirsan yihiin xirfadaha wadajirka ah ee siyaabo aan suurta gal u ahayn dhowr sano ka hor. Harvard Business Review.
Warqadda Cad ee Microsoft, Had iyo jeer Xidho: ABC-yada Iibka ee Casriga casriga ah, waa agab aad ufiican oo lagu socodsiiyo ururkaaga isbadalada, iyo waliba talobixinta ilaha cajiibka ah sida saaxiibkay Jason Miller oo ka socda LinkedIn iyo daraasiin kale oo khubaro ah oo ku jihaynaya iibintaada dhinaca dabaysha halkii aad ka dagaalami lahayd.
Waa kuwan 10 tirakoob muhiim ah oo ka socda warqadda cad ee bixisa caddayn adag, ilaha oo dhan, oo ah inaad u baahan tahay inaad qaadato tiknoolajiyad haddii aad rajeynayso inaad dardargeliso oo aad kordhiso waxtarka iibkaaga.
Sida laga soo xigtay Waxsoosaarka Xawaaraha, Wakiilada Iibinta waxay kaliya ku qaataan 22% usbuucooda si dhab ah iibinta. A Go'aannada Sirius ayaa shaaca ka qaaday in 65% shirkadaha iibkooda ay saacado badan ku qaataan howlo aan iib aheyn, oo ay ka mid yihiin qodista kheyraadka iyo daweynta qalabka wax lagu soo bandhigo.
Sida laga soo xigtay SBI, iibsadayaashu waa 57% habka loo maro wareegga iibsiga ka hor inta aysan la xiriirin iibka. Iibsashada adag, lambarkan u boodayaa 70%.
Sida laga soo xigtay ah Daraasada doorbidida IBM, wicitaan qabow ayaa kaliya 3% waxtar leh.
Isticmaalka LinkedIn Inmail, dadka qaata waxay u badan tahay inay ka jawaabaan kuwaas booqashada 67% waqtiga
Sida laga soo xigtay Aragtida Shirkadaha, 74% iibsadayaashu waxay doortaan shirkaddii markii hore ahayd in lagu daro qiimo
79% dadka iibka ah ee gaadha kootada waxay adeegsadeen farsamooyinka iibinta bulshada. 15% oo keliya kuwa aan isticmaalin iibinta bulshada ayaa kooto gaadhay, sida laga soo xigtay SBI.
Iibinta bulshada waxay ahayd # 1 habka loogu talagalay iibka iibka si ay u soo saaraan hogaankooda, sida laga soo xigtay SBI.
Sida laga soo xigtay Microsoft, fikradaha xogta laxiriira rajada waxay yareyn karaan waqtiga kubixiyay baaritaanka wicitaan ka badan 70%.
The Daraasada Hab-dhaqanka Miller Heiman ee Daraasaadka Ugu Fiican waxay ogaadeen in 91% ururada heer caalami ay iska kaashadaan dhamaan waaxyaha si loo xiro heshiisyo waawayn, halka kaliya 53% dhamaan ururada ay iska kaashadeen heshiisyo waawayn.
Shirkadaha adeegsada shabakadaha bulshada ee ganacsiga waxay arkeen waxsoosaarka ganacsiga inuu sare u kacay ilaa 30%, sida laga soo xigtay Machadka Caalamiga ah ee McKinsey.
Korsashada ayaa gabi ahaanba fure u ah. Ururada wax iibinta ee waaweyni waxay raadinayaan aaladaha iyo adeegyada u saamaxaya wakiiladooda iibka inay iibiyaan waxqabadyo dhakhso iyo ka weyn. Ururada iibka ee la halgamaya ayaa fulinaya xalalka dib u dhigaya geedi socodka iyo wax soosaarka kooxahooda.
Shirkadaha horusocodka ah waxay badalayaan hababka ganacsiga si ay ula qabsadaan qaab cusub oo shaqo oo ay saameeyeen aaladaha mobilada, qalabka iskaashiga iyo tikniyoolajiyadda bulshada. Avanade.
U fiirso feejignaanta soo socota, warqadda cad, iyo taxanaha tababarka iibka ee aan ku bixin doonno iibinta bulshada. Tani waa farqi weyn oo dhanka warshadaha ah oo aan go'aansanay inaan buuxino. Waxaan si wada jir ah u soo jiidanay khabiiro sumadeyn ah, warbaahinta bulshada iyo istiraatiijiyad nuxur leh, iyo hoggaamiyeyaasha iibka si aan u siino hanaan la xaqiijiyay oo looga faa'iideysanayo iibinta bulshada. Waqtigan xaadirka ah, hubi inaad soo dejiso warqadan cad oo hubi waxa Microsoft Dynamics ay tahay inay bixiso.
Had iyo jeer Xidho: ABC-yada Iibka ee Casriga casriga ah
Tags: markasta iibinavanadearagti shirkadeedIBMJason MillerLinkedInlinkedin cinwaankamcKinsey caalami ahMicrosoftMiller heimanwax soo saarka xawaarahadardargelinta iibkaheerarka iibkaKordhinta Iibkabarashada dhaqanka iibkawax soo saarka iibkaSBIiibintaiibinta kartiiibinta sirdoonkaiibinta tikniyoolajiyaddago'aamada siriusiibinta bulshada
9 Tirakoobka Saamaynta Khibradda Isticmaalaha Mobilada